Iindaba - Itekhnoloji yeRFID esetyenziswa kwimveliso yezothutho kaloliwe
Itekhnoloji yeRFID esetyenziswa kumzi mveliso wezothutho kaloliwe
Amalungiselelo emveli okubanda kwempahla kunye nokugcinwa kwempahla kugcinwa azicacanga ngokupheleleyo, kwaye abathumeli kunye nabanikezeli beenkonzo zomntu wesithathu banokuthembana okuphantsi. Ukutya okufudumeza ukutya okuphantsi kakhulu, ukugcinwa kwempahla, amanyathelo okuhambisa, kusetyenziswa ubushushu beRFID iithegi zombane kunye nesoftware yenkqubo yokugcina ukusebenza ngokukuko kwempahla ebandayo ukuqinisekisa ukhuseleko lokutya kuko konke ukulawulwa kwenkqubo yokuhambisa
Wonke umntu uyazi ukuba uloliwe uthutho ulungele umgama omde kunye nomthamo omkhulu wezothutho, kwaye kuluncedo kakhulu kwimithwalo emide ekumgama ongaphezulu kwe-1000km. Umda welizwe lethu ubanzi, kwaye ukuveliswa kunye nokuthengiswa kokutya okukhenkcisiweyo kukude kakhulu, nto leyo ebonisa umgangatho wangaphandle onenzuzo wokuphuhliswa kwendlela kaloliwe ebandayo. Nangona kunjalo, kweli nqanaba, kubonakala ngathi umthamo wothutho lwezothutho olubandayo kwimizila kaloliwe yase China incinci, ukubalwa okungaphantsi kwe-1% yemfuno iyonke yophuhliso lwezothutho olubandayo eluntwini, kunye nezibonelelo zomgaqo kaloliwe kuhambo olude alusetyenziswanga ngokupheleleyo.
Izinto zigcinwa kwisikhenkcezisi somenzi emva kokuba senziwe saza sapakishwa ngumenzi. Iimpahla zifakwa kwangoko emhlabeni okanye kwipallet. Inkampani yokuvelisa A yazisa inkampani yokuhambisa ngonikezelo kwaye inokuyihambisa kwangoko kwinkampani yentengiso C. Okanye kwishishini A irente inxenye yendawo yokugcina kwindawo yokugcina izinto kunye neshishini lokwenza izinto B, kwaye iimpahla zithunyelwa kwindawo yokugcina izinto kunye neshishini lokuloba B, kwaye kufuneka yahlulwe ngokwe-B xa kukho imfuneko yoko.
Yonke inkqubo yezothutho ayicacanga ngokupheleleyo
Ukulawula iindleko ngexesha lenkqubo yonke yokuhanjiswa, ishishini lokuhanjiswa kweqela lesithathu liya kuba nemeko yokuba iyunithi yefriji icinyiwe ngexesha lonke lokuhamba, kwaye iyunithi yefriji ivuliwe xa ifika kwisikhululo. Ayinakuqinisekisa ukuba yonke into ibandayo. Xa iimpahla zizisiwe, nangona umphezulu weempahla ubanda kakhulu, enyanisweni umgangatho sele uncitshisiwe.
Iinkqubo ezigciniweyo azicacanga ngokupheleleyo
Ngenxa yokuqwalaselwa kweendleko, ukugcinwa kwempahla kunye namashishini olungiselelo aya kuqala ukusebenzisa ixesha lokuhambisa amandla ebusuku ukunciphisa iqondo lobushushu lendawo yokugcina kwiqondo eliphantsi kakhulu. Izixhobo zokukhenkceza ziya kuba semlindweni emini, kwaye iqondo lobushushu kwindawo yokugcina iqhwa iya kutshintsha ingaphaya kwe-10 ° C okanye nangaphezulu. Kwangoko kubangele ukwehla kwithala lokutya. Indlela esweni yokujonga ngokwesiko ngokubanzi isebenzisa irekhodi lobushushu bevidiyo ukulinganisa ngokuchanekileyo kunye nokurekhoda ubushushu bazo zonke iimoto okanye ukugcinwa okubandayo. Le ndlela kufuneka iqhagamshelwe kwi-cable yeTV kwaye ilawulwe ngesandla ukuthumela idatha, kwaye ulwazi lwedatha lusezandleni zenkampani ephetheyo kunye nenkampani yokugcina izinto. Umthumeli wayengenakufunda ngokulula idatha. Ngenxa yenkxalabo malunga nobunzima bungasentla, ezinye iinkampani ezinkulu ezixuba amayeza okanye iinkampani zokutya e-China kweli nqanaba banokukhetha ukutyala imali eninzi kulwakhiwo lweendawo zokugcina ezigcinwe ngumkhenkce kunye neenqanawa zothutho, kunokuba ukhethe iinkonzo zomntu wesithathu iinkampani ezibandayo zokwenza izinto. Ngokucacileyo, indleko zotyalo mali olukhulu kakhulu kakhulu.
Xa inkampani ehambisa iimpahla ithatha iimpahla kwinkampani yokuvelisa A, ukuba akunakwenzeka ukuhambisa ngeepelethi, umqeshwa kufuneka athuthe iimpahla ukusuka kwipallet ukuya kwisithuthi sokuhambisa esiqandisini; emva kokuba iimpahla zifikile kwinkampani yokugcina B okanye kwinkampani yentengiso C, umqeshwa kufuneka azidlulise iimpahla zisuka Emveni kokuba itroli yezothutho efrijiweyo ikhutshiwe, ibekwa ephaleni emva koko itshekishwe kwindawo yokugcina izinto. Oku ngokubanzi kubangela ukuba iimpahla eziziisekondari zihanjiswe zibhekiswe phantsi, ezingathathi ixesha kunye nokusebenza, kodwa zonakalisa ngokulula ukupakishwa kweempahla kwaye zibeka emngciphekweni umgangatho weempahla.
Ukusebenza kancinci kolawulo lokugcina
Xa ungena kwaye uphuma kwindawo yokugcina izinto, kufuneka kungeniswe iphepha kunye neerisithi ezisekwe kwiphepha, emva koko zingene ngaphakathi kwikhompyuter. Ungeniso lusebenza kakuhle kwaye luyacotha, kwaye inqanaba lempazamo liphezulu.
Ulawulo lwabasebenzi inkunkuma
Iinkonzo ezininzi zomsebenzi wezandla ziyafuneka kulayishwa, ekothulweni nasekuphatheni iimpahla kunye nakwiidiski zekhowudi. Xa ukugcinwa kweshishini kunye ne-logistics ye-B irenta indawo yokugcina, kuyafuneka ukuba kusekwe abasebenzi bolawulo lokugcina.
Yenza isikhululo sikaloliwe esibandayo sokugcina izinto, esinokusombulula iseti epheleleyo yeenkonzo ezinje ngokuthuthwa kwemithwalo, ukugcinwa kwempahla, ukuhlolwa, ukuhlelwa kohlobo kunye nokuziswa.
Ngokusekwe kwisicelo sepallet yeRFID yobuchwephesha. Uphando lwenzululwazi olwazise obu buchwephesha kushishino lwenkqubo yokubanda ebandayo kudala lwenziwa. Njengeshishini lolawulo lolwazi olusisiseko, iipelethi zikulungele ukugcina ulawulo oluchanekileyo lolwazi lwezixa ezikhulu zeempahla. Ukugcina ulawulo lolwazi lwezixhobo ze-pallet ze-elektroniki yeyona ndlela iphambili yokwenza isoftware yokuhanjiswa kwesoftware kwangoko, ngokufanelekileyo nangokukhawuleza, ngeendlela ezichanekileyo zolawulo kunye nolawulo olufanelekileyo kunye nokusebenza. Kubaluleke kakhulu ngokubonakalayo ekuphuculeni ukulawulwa kwempahla kunye nokunciphisa iindleko zothutho. Ke ngoko, i-RFID iqondo lobushushu elektroniki zinokubekwa kwitreyi. Iimpawu ze-elektroniki zeRFID zibekwe kwitreyi, enokuthi isebenzisane nendawo yokugcina izinto ekrelekrele yokuqinisekisa uluhlu lweempahla olukhawulezileyo, oluchanekileyo noluchanekileyo. Ezi tag ze-elektroniki zixhotyiswe ngee-eriyali ezingenazingcingo, i-IC edityanisiweyo kunye nabalawuli beqondo lobushushu, kunye nokubhitya, ngaba ibhetri yeqhosha, ebisoloko isetyenziswa ngaphezulu kweminyaka emithathu, inemiqondiso emikhulu yedijithali kunye nomxholo wolwazi lobushushu, kungakuhle kakhulu ukuqaphela ukubonelelwa kwesakhelo sobushushu besekethe ebandayo.
Umxholo osisiseko wokungenisa iipelethi uyafana. Iipelethi ezinobushushu beethegi zombane ziya kuthiwa thaca okanye ziqeshwe kubavelisi abasebenzisanayo simahla, ukuze abavelisi bafake izicelo kwiziko elibandayo lomgaqo kaloliwe, ukugcina umsebenzi wepallet uhanjiswa ngokungaguquguqukiyo, kunye nokukhawulezisa iipelethi kwi amashishini okuvelisa, amashishini okuhambisa, amakhonkco abandayo Ukusetyenziswa kweenkqubo eziphakathi zokujikeleza kumaziko olungiselelo kunye namashishini athengisa ukukhuthaza ukuthuthwa kwemithwalo kunye nomsebenzi wobungcali kunokuphucula ukusebenza kwempahla yokuhanjiswa kwempahla, ukunciphisa ixesha lokuhambisa, kunye nokunciphisa kakhulu iindleko zothutho.
Emva kokuba uloliwe efika kwisikhululo sokufika, izikhongozeli ezifrijiweyo zithunyelwa kwangoko ziye kwindawo yokulayisha neyothula umthwalo kwishishini le-B yesikhenkcezisi, kwaye ukuhlolwa kokudilizwa kuyenziwa. I-forklift yombane isusa iimpahla ngeepelethi kwaye ibabeka kwisithuthi. Kukho ucango lokuhlola olwenziwe ngaphambili kwesithuthi, kwaye kufakwe isoftware yokufunda emnyango. Emva kwee-tag ze-elektroniki zeRFID kwibhokisi yemithwalo kunye nepallet yokungena kwisoftware yokufunda, iqulethe umxholo wolwazi weempahla ezilayishwe lishishini A kwi-ic edibeneyo kunye nomxholo wolwazi kwipallet. Okwangoku ipallet igqitha umnyango wokuhlola, ifundwa yisoftware ifunyenwe kwaye igqithiselwe kwisoftware yekhompyuter. Ukuba umsebenzi ujonga umboniso, unokuqonda uthotho lolwazi lwedatha njengenani elipheleleyo kunye nohlobo lwempahla, kwaye akukho sidingo sokujonga ngokwenyani ukusebenza. Ukuba umxholo wolwazi lwempahla oboniswe kwiscreen sokubonisa uhambelana noluhlu lokuhambisa olunikezwe nguShishino A, lubonisa ukuba umgangatho ufezekisiwe, umqeshwa ucinezela iqhosha le-OK ecaleni komthuthi, kwaye iimpahla kunye neepelethi ziya kugcinwa kwindawo yokugcina izinto ngokokuhambisa kunye nobuchwephesha bobuchwephesha obugcinekileyo Indawo yokugcina eyabelwe inkqubo yolawulo lwengqondo olukrelekrele.
Ukuhanjiswa kweetraki. Emva kokufumana ulwazi lweodolo kwinkampani C, inkampani A yazisa inkampani B ngokuziswa kwetraki. Ngokwengcaciso ye-odolo etyhilwe yinkampani A, inkampani B yabela ukuhlelwa okucacileyo kokuhanjiswa kweempahla, ukuphuculwa komxholo wolwazi weRFID weempahla zepallet, iimpahla ezilungiswe kukuhanjiswa okucacileyo zilayishwe kwiipelethi ezintsha, kunye nomxholo omtsha wolwazi lweempahla. inxulunyaniswa nee-tag ze-elektroniki zeRFID kwaye ibekwa kwindawo yokugcina iishelfu, zilinde ukuhanjiswa kwemveliso. Iimpahla zithunyelwa kwishishini C ngeepelethi. Ishishini C lilayisha kwaye lothule iimpahla emva kokwamkelwa kobunjineli. Iipelethi ziziswa lishishini B.
Abathengi bayazichola. Emva kokuba imoto yomthengi ifikile kwishishini B, umqhubi kunye negcisa lokugcina umkhenkce lijonga umxholo wolwazi, kunye nezixhobo zokugcina ezizenzekelayo ezihambisa iimpahla ukusuka kwindawo yokugcina engumkhenkce ukuya kwisitishi sokulayisha kunye nokothula. Ukuhamba, ipallet ayisaboniswa.